MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2014-02-09
at 2/14/2014 01:49:00 PM No comments:
အစိုးရစစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသော KIA အဖွဲ့ဝင် တဦး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်
တရုတ် နယ်စပ် ကချင် လွတ် လပ်ရေး အဖွဲ့KIO ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာ အနီး ဂျာအိန်ရွာ (Ja Ing Yang) မှ ဦးဇော် ဆိုင်းနန် (Slg. Zau Seng Nan) အား လဂျား ယန် (Laja Yang) တွင် အစိုးရ တပ်မှ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့ သည့် ဇန်န၀ါရီလတွင် သမ္မတ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့ သည်။ ၄င်း၏ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရခြင်းနှင့် ထောင်တွင်း ရင်ဆိုင်ရသော အခြေအနေများ ကို KNG ကချင်သတင်း ဌာနမှ ဆက် သွယ်မေးမြန်း ထား သည်။
at 2/14/2014 01:40:00 PM 1 comment:
ကချင်တောင်ပေါ်ဒေသတို့ အကြိုသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံရန် စတင်လုပ်ဆောင်
ကချင်ပြည် နယ် တောင်ပေါ်ဒေ သနှင့်ဝေး လံသော ဒေသ တို့တွင် အစိုးရ၏ တစ်နိုင်ငံ လုံး အတိုင်းအတာ သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ခံသော လုပ်ငန်း စဉ်အား ရက်ပေါင်း (၃၀)ကြို တင်ကောက်ခံသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြစ်ကြီး နားမြို့ရှိ လူဝန်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဦးစီး ဌာနမှ သိရသည်။
at 2/14/2014 01:38:00 PM No comments:
at 2/14/2014 08:53:00 AM No comments:
at 2/14/2014 12:03:00 AM No comments:
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ အနီးရှိ စခန်းငယ် များအား တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့
အစိုးရ တပ်များသည် ဇန္နာဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့မှ စပြီး ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIO) ဌာနချုပ် အနီးရှိ တပ်ရင်း(၁၈) တပ်ဖွဲ့စခန်း ငယ်တခုဖြစ် သည့် ဂျာအိန်ယန် (Ja Ing Yang) စခန်းအား နံနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် စတင်တိုက် ခိုက်ရာ ညနေ (၅)နာရီတွင် ဆုတ်ခွာ ပေးခဲ့ရ ကြောင်း KIA စစ်ရုံး မှ ပြော ပါ သည်။
ယင်းစခန်း သည် (KIA) ဒေသခံ ပြည်သူ့ စစ်စခန်း ဖြစ်ပြီး က ယား ပြည်နယ် ဖယ်ခုံမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၇) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာန ချုပ် လက်အောက် ခံဖယ်ခုံမြို့ အခြေစိုက် ခမရ (၄၂၁)၊ ဆီဆိုင်မြို့ အခြေစိုက် ခမရ (၄၂၄) ၊ ဘန်းယဉ်မြို့ အခြေစိုက် ခမရ (၄၂၆)၊ ဘန်းယဉ်မြို့ အခြေစိုက် ခမရ ( ၄၂၅) စစ်ေ ကြာင်း များနှင့် က ချင်ပြည်နယ် မရမ်း မြို့ အခြေချ ခလရ (၂၆၀) တပ်ပေါင်း များ က လက်နက်ကြီး အင်အား များဖြင့် ဒလစပ် ပစ်ခတ် ခဲ့သည့် နည်း ဗျူ ဟာဖြင့် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသည်။
at 2/13/2014 01:28:00 PM No comments:
ကေအိုင်အိုအဖွဲ့မှ မိုင်ဂျာယန်မြို့တွင် ဥပဒေကျောင်းဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်
ကေအိုင်အိုအဖွဲ့မှ ဖယ်ဒရယ် ဥပဒေ ကျောင်း (Federal Law Academy) အား ၂၀၁၄ ဇွန်လမတိုင်ခင် ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း ကေအိုင်အို ပညာရေးမှူး ဦးနော်ထွယ်မှဆိုသည်။
အဆိုပါကျောင်းအား ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နေမြေဖြစ်သော မိုင်ဂျာယန်တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား (၆၀) ယောက်အား လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဆိုသည်။
at 2/13/2014 08:53:00 AM No comments:
ကချင်ပြည် နယ် ဗန်းမော် ခရိုင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့ နယ်ခွဲ ဂျာအင်ယန်ကျေး ရွာအနီး မှာ အစိုးရ တပ်နဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်တွေအကြား ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း က တိုက် ပွဲဖြစ်ပြီး KIA တပ် ရင်း ၁၈ ရဲ့ ခါအူ ရှေ့တန်း တပ်စခန်း ကို အစိုးရ တပ်တွေက သိမ်းပိုက် လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
at 2/13/2014 08:52:00 AM No comments:
ချီဖွေမြို့ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ (၂)ထပ်ဆောင်ပြိုကျ
ချီဖွေမြို့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းရှိ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည့် (၂)ထပ်ကျောင်းဆောင် အကုန်ပြိုကျလာသဖြင့် စာသင်ဆောက်အဖြစ် အသုံးမပြုနိုင်တော့သည့် အတွက် ဖျက်သိမ်းခွင့်တင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုကျောင်းမှကျောင်းအုပ်ဆရာမ ဒေါ်ဂျီဘောမ်နမ် မှဆိုသည်။
ထို (၂)ထပ်ဆောင်အား ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် မှ ယခင်မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးလက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည့် ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ချီဖွေမြို့ရှိ ဘာသာရေးဆရာတစ်ဦးမှဆိုသည်။
at 2/13/2014 08:49:00 AM No comments:
KIO GINJAW GINRA NI HPE ZING NA MATU MYEN ASUYA KAWN MATSUN
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIAaGinjaw Ginra ni rai nga ai Laiza, Maija Yang, Lai Sin hte ahkyak ai shara ni hpe htim gasat zing na matu myen asuya kawn matsun taw sai lam KIO Ginjaw na Du Kaba langai mi kawn tsun shana wa ai. Gade nna yang majan kaba bai byin wa na masa nga ai majaw Mungdan kata hte Mungdan shara shagu chyam bra nga ai Wunpawng Sha ni yawng aja awa akyu jawm hpyi ya na matu mung garum hpyi dat ai lam chye lu ai.
at 2/12/2014 08:54:00 PM No comments:
at 2/12/2014 08:51:00 PM No comments:
အစိုးရတပ်များ KIA ဌာနချုပ်အနီး တပ်စခန်းတခု ထပ်မံသိမ်းပိုက်
ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့အနီး KIA ခအူ (Hka -U) စခန်း အား ယနေ့ ဖေဖေါ် ၀ါရီ ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲချိန် တွင် အစိုးရတပ်မှ ထပ်မံ သိမ်းပိုက် လိုက်ကြောင်း KIO နည်းပညာ အဖွဲ့ Technical Advisory Team မှ ဆရာဒေါင်ခါး ပြော သည်။
ထိုစခန်း သည် ယမန်နေ့ တွင် အစိုးရတပ်များလက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်၍ တပ်စွဲ လိုက်သော KIA ဂျာအိန်ယန် စခန်း (Ja Ing Yang post) မှ ၆ မိုင်အကွာ တွင် ရှိသော စခန်းဖြစ်ပြီး အစိုးရ တပ် တပ်မ ၉၉ စစ်ကြောင်း သည် စစ်အင်အား ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် ထပ်မံပစ်ခတ် တိုက်လာခြင်းကြောင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်ရင်း ၁၈ ဖက်မှ ထပ်မံနောက် ဆုတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ် သည်ဟု သိရသည်။
at 2/12/2014 08:47:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ တိုင်းရင်း သားတွေနဲ့ အတူ စည်းစည်း လုံးလုံး ကြိုးစားခဲ့ တဲ့ ပင်လုံ စာချုပ်ဟာ သက် တမ်း ၆၇ နှစ်ပြည့် ခဲ့လေပြီ။ တကယ်တော့ ပင်လုံစာချုပ် ဆိုတာ မြန်မာနို င်ငံက တကယ့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ သူရဲကောင်းဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့ လုပ်ရပ်တွေထဲက တခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ပင်လုံစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်တွေကို မခံစားကြရသေးဘူးလို့ အခု လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောနေကြတယ်။
at 2/12/2014 08:44:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA hte myen tai hpyen ni majan kaba bai byin hpang wa na masa nga ai lam shiga na chye lu ai. Ya ten Miwa asuya ni gaw Jinghpaw Munghkran de nga ai Miwa mung masha ni yawng hpe February (14) ya hpang jahtum da nna Jinghpaw mung kaw na Miwa hkran de wa na lam ndau nga sai lam buga masha ni kawn chye lu ai. Miwa asuya kawn ya na zawn shi mungdan masha ni hpe Miwa hkran de wa na matu ndau shaga ai lam gaw lai wa sai bat hkan kawn rai sai lam na chye lu ai.
at 2/12/2014 10:32:00 AM No comments:
at 2/11/2014 09:08:00 PM No comments:
ဧရာ ၀တီမြစ်ကြီး မပျက် စီးအောင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ အနေနဲ့ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းဖို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အင်အား စုကော်မတီ က ဦးစီးပြီး မေခ မလိခ အထိ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် မယ် လို့ ဒီနေ့ ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
စစ်အစိုးရ လက်ထက် တုန်းက သဘော တူညီချက်နဲ့ အကောင် အထည်ဖော်နေ တဲ့ ဧရာ ၀တီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ကို အများပြည် သူတွေရဲ့ ကန့်ကွက် မှုတွေကြောင့် လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သူ့အစိုးရ သက်တမ်း ကာလ မှာ ရပ်ဆိုင်း ထားတာပါ။
at 2/11/2014 09:06:00 PM No comments:
at 2/11/2014 08:59:00 PM No comments:
မြစ်ကြီးနား မီးရထား ဘူတာ က ထွက်ခွာလာတဲ့ အမှတ် ၉၃၈ ကုန်တင် မီးရထား ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းတော် မြို့နယ်၊ မော်လူး မီးရထား ဘူတာနဲ့ နန့်စီးအောင် မီးရထား ဘူတာကြား မှာ ဒီနေ့မနက် ၇ နာရီ ၅ မိနစ် အချိန်က ရထားတွဲချော် တိမ်းမှောက် ခဲ့ပါတယ်။
at 2/11/2014 03:41:00 PM No comments:
ကေအိုင်အေ နှင့် စစ် မကြာခဏ ဖြစ်ရ သည့် အကြောင်းအရင်းမှာ သစ်မှောင်ခို လမ်းကြောင်း ရှင်းတဲ့ အခါ ကေအိုင် အို အောက်ခြေက စစ်သားတွေက လိုက်လိုက် တိုက်လို့ ဖြစ်တယ် လို့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှ ဆိုပါတယ်။
ရဲတွေ မလုပ်နိုင် သည့် အတွက် စစ်တပ်က လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လည်းဆိုသည်။
စစ်တပ်ဘက်က အင်းအားသုံးပြီး လိုက်တိုက်တယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ကြောင်း ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းလည်း မဟုတ်ကြောင်း ကေအိုင်အိုမှသာ စတိုက်တဲ့အတွက် တိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
at 2/11/2014 03:38:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ် နယ်မြေဖြစ်သော ဂျာအိန်ယန် ကျေးရွာ တွင် ဖေဖော်ဝါရီ (၁၀) ရက် မနက် (၁၀း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့်မှ တိုက်ပွဲများ ပြင်း ထန်စွာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွား လာကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
at 2/11/2014 01:18:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Ginjaw Ginra rai nga ai, KIA Dap Ba (5) Ginra Ja Ing Yang Mare hta February (10) ya jahpawt hkying (10:00 AM) daram hta laja lana gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya hpyen dap hk-l-y (221) dap ni gaw Ja Ing Yang Mare kaw shanu shara la nga ai Du Jumm Myu Zin woi awn ai Mung Shawa Kanawn Mazum Hpyen Hpung (MKM) ni hpe sa htim gasat lai wa ai re lam, shanni daw hkying (1:00 PM) ten ram hta myen asuya dap hk-l-y (261) dap ni n-gun (150) ram bai jat nna sa htim gasat garum lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya hpye dap ni gaw shana de jan shang wa ten du hkra KIA ni nga ai shara ni de laknak kaba ni hte gap sharu bun lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
at 2/11/2014 08:47:00 AM No comments:
KIA ဌာနချုပ် အနီး ဖြစ်ပွားသော ဂျာအိန်ယန်ကျေးရွာ တိုက်ပွဲအခြေအနေ
မြန်မာ အစိုးရ တပ် ခလရ (၄၂၁) တပ်ဖွဲ့ မှ ကေ အိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ ဝင် များ စခန်းချ ထားရာ ဂျာအိန် ယန်ကျေး ရွာ အား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် မနက်ပိုင်း က စတင် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တိုက်ပွဲ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြန်မာ အစိုးရ တပ် ခလရ (၂၆၁) တပ် မှ အင်အား (၁၅၀)ကျော် စစ်ကူ ထပ်မံဖြည့်တင်း ၀င်ရောက် လာမှုကြောင့် ညနေပိုင်း ထိ တိုက်ပွဲပြင်း ထန်စွာ ထပ်မံဖြစ် ပွားခဲ့သည်။
at 2/11/2014 08:42:00 AM No comments:
at 2/10/2014 10:39:00 PM No comments:
KIA တပ် ရင်း ၁၂ နှင့် အစိုးရ တပ်ကြား ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲ တွင် KIA အရာရှိ ၂ ဦးကျ
ဗန်းမော် ခရိုင် မန်စီမြို့ နယ် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တပ်ရင်း ၁၂ ဒေသ နား အိုကြီး အနီး ပရန် တိုင်းမှော်ကြား ဖေဖ၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့ တွင် အစိုးရ တပ်နှင့် KIA တပ်ရင်း ၁၂ တို့ တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားခဲ့ရာ KIA ဘက်မှ အရာ ရှိ ၂ ဦးကျဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
၎င်း အစိုးရတပ် သည် ရွှေဂူ တပ်ခြေမြန် တပ်ရင်း ၆၀၂ ဖြစ်ပြီး စစ် အင် အား ၁၀၀ ကျော်ဖြင့် KIA တပ်ရင်း ၁၂ သို့ လှုပ်ရှား လာစဉ် နှစ်ဖက် တပ်များ မိနစ် ၃၀ ကျော်ကြာ ထိပ်တိုက် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ကာ KIA ဒုဗိုလ် မရန်အုန်ဆော်တန် (Lat du Maran Ungsau Tang)နှင့် အရာခံ ဗိုလ်မရစ်လဖရီး (Du tau Marip La Hpri) တို့ ၂ ဦး ကျဆုံး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်ရင်း ၁၂ တပ်ဖွဲ့ မှ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိ တဦး KNG ကချင် သတင်း ဌာန သို့ပြောသည်။
at 2/10/2014 10:24:00 PM No comments:
at 2/10/2014 10:22:00 PM No comments:
at 2/10/2014 09:47:00 PM No comments:
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအပေါ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ၏ အမြင်သဘောထား (၁)
ခွန်မြင့်ထွန်း (ဥက္ကဌ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ - PNLO)
ကျနော်တို့ က အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ် အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်တွေမှာ သဘောတူ ထားခဲ့တဲ့ သဘော တူညီချက်တွေ ကို လေးစား တန်ဖိုးထား တယ်။ ကျနော်တို့ အလေးအနက် လေးစား တန်ဖိုးထား သလိုပဲ လိုင်ဇာ ညီလာခံကြီးမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အတူတူ လက်မှတ်ရေး ထိုးထားတဲ့ လိုင်ဇာ သဘောတူညီချက်ကို လည်း ကျနော်တို့ တန်ဖိုး ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲဒီသဘောတူ ညီမှု နှစ်ရပ်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ တစ်ပြည်လုံးအတွက် ကောင်းမယ့် သဘောတူညီချက်ရရေးကို ကျနော်တို့ ကြိုးစားဆောင် ရွက်နေပါတယ်။
at 2/10/2014 09:38:00 PM No comments:
ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၀)ရက် မနက်ပိုင်း (၉း၀၀)နာရီ အချိန်ခန့် မှစ၍ နန်ဆန် ယန်ကျေးရွာ အထက် နန့် ဆန် ချောင်းဖျား ဂျာအိန်ယန်ကျေးရွာ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ယခုသတင်းရေးသားနေချိန် ညနေပိုင်း အချိန်ထိတိုင်အောင် နှစ်ဖက်တပ်များ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ် ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
at 2/10/2014 09:24:00 PM No comments:
(၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှ သတင်းတစ်ခု)
တပ်မတော်စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ရုံးရဲ့နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ ဌာနကြီး ကတော့ စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးဌာနကြီး (တန်ပြန်) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေး ဌာနကြီး (ပြည်တွင်း)/(ပြည်ပ)တို့ဟာ စစ်ဖက် သတင်းရယူရေး (Military Intelligence)၊ မြို့ပြသတင်းရယူရေး (Civil Intelligence) စတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တာဝန် (Positive Intelligence) တွေကို ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးဌာနကြီး (တန်ပြန်) ကတော့ တန်ပြန်သတင်းရယူရေး(Counter Intelligence) နဲ့ သတင်းရယူမှုတားဆီးရေး (Negative Intelligence) ကို ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
at 2/10/2014 09:17:00 PM No comments:
TNLA တို့ ဖြစ်ပွားသော ယနေ့ တိုက်ပွဲတွင် ခမရ တပ်ဖက်မှ ၃ ဦးကျဆုံး
ယနေ့ ဖေဖော် ဝါရီ လ၁၀ ရက် နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီ အချိန် ခန့်တွင် တအန်း တပ် မတော် (၂၅၆) တပ် ရင်း ၏ လှုပ်ရှား တပ်ဖွဲ့နှင့် အမှတ်(၁) စစ် ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် မှ နမ့် လမ် အခြေစိုက် ခမရ (၅၀၅၊ ၅၀၆) တို့ နမ့်ဆန် မြို့နယ် နမ့်ယန်းနှင့် ဟိုမိန်းရွာ အကြား (မန်တုံ-နမ့်ဆန်ကား လမ်းမ) အနီး တွင် နှစ်ဖက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ် ပွား ခဲ့ရာ ခမရ တပ်ဖွဲ့ ဝင် အနဲဆုံး (၃) ဦး ကျဆုံး ပြီး၊ (၁) ဦး ထိခိုက် ဒါဏ်ရာ ရရှိသွား သည်။
at 2/10/2014 03:59:00 PM No comments:
at 2/10/2014 03:08:00 PM No comments:
at 2/10/2014 03:07:00 PM No comments:
at 2/10/2014 10:13:00 AM No comments:
at 2/09/2014 09:33:00 PM No comments: